OROMIYAA-Keessatti Wayyaaneen OPDO Qabattee Maal Xaxaa Jirtii Maal Xaxaas Turtee?! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOROMIYAA-Keessatti Wayyaaneen OPDO Qabattee Maal Xaxaa Jirtii Maal Xaxaas Turtee?!
OROMIYAA-Keessatti Wayyaaneen OPDO Qabattee Maal Xaxaa Jirtii Maal Xaxaas Turtee?!
Note: Amajji 2018 Qalbeessaa Dhangi’aa Finfinnee Oromiyaa Boondiin OPDO alaaf keessatti maal fakkaata? Barruu kana suuta dubbisaa! Waan dhugaa dubbannuuf nu jibbu! jette urunguun ykn jajjuun Kaleessarraa kaana. Biyya har’a akka waan ofii qofa ijaaraniitti habaashaan ittiin dhaadatan Xoophiyaan lafee abboota keenyaan ijaaramte. Lafee nama keenyaan haa ijaaramtu malee numaaf ‘Si’ool’ lafarraa taatee nu dararaa jaarrolee lakkoofsisaa jirti. Xoophiyaa ijaaruu keessatti gootonni keenya gootummaa isaaniin lafee cabanii dhiiga dhangalaasaa turan
Gootota keenya Xoophiyaa ijaaran garii immoo kirisinnaa ykn bishaan itti facaasa tokkittiin maqaa jijjiiranii goota isaanii taasifatan. Hanni habashaa hanna Siyyaasaa qofa miti, gootallee hataa turan. Addunyaarratti waan ta’e hinbeekne nurratti taasisan. Seenaa keenya nii hatu, aadaa uffannaa nii hatu, waanjiraa nii hatu, Hanni habashaan godhu tokkoof lama miti. Gootota hedduu hataman yoo maqaa dhoofne, Magarsaa Badhaasaa (Abune Pheexiroos), Balaay Zallaqaa, fi hedduu isaanii maqaa dhahuun nii dandaa’ama.
Gootota Oromoo hedduummoo maqaa isaanii kaasuu kan lagatan gootota biyya abbaa isaanii irraa garboonfataa fincilaa turan kanneen akka Baalchaa Abbaa Namsoo, Gabayyoo Gurmuu fi Hedduu isaanii akka maqaa abbiyyuutti ykn amaatiitti lagataa turaniiru. Waan hedduu nama aarsu keessaa kan nama mufachiisu haleellaa jabaa kan xaaliyaanii irraan dhaqqabsiisaa ture gartuu “LENCA GURRAACHAA (XUQUR ANBASSAA)” akka waan ofii abboonni isaanii ykn habashaan ijaareetti yeroo ittiin of dhaadessan argaatuma jirra.
Hanna siyyaasaa keessaa kan hanga ammaa Habashaan Oromoo irratti taphateen kulkula jabaa kan nuuf ta’e, qabsoo ABO’n itti dadhabee darguu kuffisuu danda’e hatuun Wayyaaneen hanga har’aa uummata keenya saamuu dandeessee jirti. Hanni siyyaasaa Oromoo irratti habashootaan jaarrota dheeraa akka dhaqqabsiise beekamaadha.
Qabsoo ABO’n taasiseen, Waraanaa WBO humnaan cabsee darguu konkolaachise qophaa’aa isaatti Wayyaaneen abbaa taate. kun marti “karaa Sareen galte Waraabessi gala” isa jedhan, karaa booji’amtoota dargii kanneen waraana keessatti booji’amanii wabii lubbuun jiraachuu argachuuf Wayyaaneetti kufan irraan nu dhaqqabe. Gartuun booji’amtootaa OPDO waggoota dheeraaf lubbuu turuus dandaa’aniiru, kaayyoon isaanii lama buluu ture. Amma isa darbe kaasuurra kan ammaatti haa deebinu
Uummanni Oromoo qabsoo Abbaa biyyummaa taasisaa jiraachuun, Bilisummaaf ganamaa galagala Wayyaaneen wal hudhaa ooluunsaa ifaadha. Kaayyoof tarsiimoo uummata Oromoo qabsoo Bilisummaa Oromoo kana daldala godhatanii sharafaaf kan itti gargaaramaa jiran hedduun biqilaniiru. Biqiluufis jiru. Qeerroo, Oromoo Qabsoon hinsharafamtu! Hindaldalamtu! Gabaa diinaa geessanii qabsoo daldaluun gantummaadha. Ejjennoon hingurguramtu! Ejjennoo, Kutannoo, Kaayyoo, Galma, Naamusaaf barbada.
Qabsoo uummataa qabsoo Oromiyaa ijaaruu dabsanii gara qabsoo xoophiyaatti haqaaquun mataansaa sharafa. Hanni qabsoo haalaan biyyattii keessatti babal’ataa tureera. Xoophiyaa keessatti abbaan qabsoo, qabsoo gooliin gahee baroota dheeraaf qabsoon harkaa hatamaa yoona gahe. Hanni kun waggoota hedduu duras danbalee socho’aa ture. Amma kellaa qabsoo keenya shiboon haa ijaarranuu. Dargaggoo haraa irraa moonaa qabsoo akkaataa itti tiksan abbootaa qabsoo keenya yoonaan gahan irraa baruuf dhaaluu qaba!
Sharariitiin ilbiisa xaxxuudha. Xaxaan sarariitii Kannisa, Titiisa fi ilbiisota biroo qabuu irratti sarariitiif foon ilbiisaa gumaata laata. Sharariitiin xaxaa xaxxuun ilbiisota soorratti. Xaxaan sarariitii ilbiisota murannoof kutannoo qaban hinqabu. Keessattuu xaxaan sarariitii Goondaaf Mixii qabuu hindandau. Ilbiisota ogeessa bakka deemaniif waan deemaniif beekan, ilbiisota egeree isaaniif egeree maatii isaaniif dhamaan qabee hinbeeku.
OPDOn sarariitiidha. Xaxaa xaxxuun uummata Oromoo mangaagaa Wayyaanee keessatti darbuun qooda guddaa bahatteetti. Xaxaan OPDO namoota ejjennoon laaffatan qaba. Qaama kaayyoof kutannoo jabaa hinqabne qabuun beekama. Keessattuu qabsaaota ejjennoo isaanii jabeessuu dadhabanii dhommoqsan liqimsaa ture ittis jira.
OPDOn ykn Sarariitiin Wayyaanee alaaf keessaa maal xaxaa jirtii?
Wantoota guddaan project jalqabaa taee wayyaaneen dalagamaa jiru Qeerroo muuduudha. Qeerroo muuduun tooftaaf icciitii mataasaa ittiin masakamu qaba. Qabsaaaa fakkaatee uummata biyya alaatti dirqama OPDO fudhatanii bobbaaaniin galma gaha. Inni alaa qabsaaaa fakkaatu OPDOn alaa maqaa Qeerroo OPDO keessaaf laata. OPDO keessaammoo kallattiin hojii securiitii ykn Basaasummaa irratti bobbaafti. Adeemsi basaasaa taasisuu jalqaba Basaasaadha jedhamee itti adeema miti. Jalqaba biyya keenyarratti hogganaa tauu qabnaadhaan hogganaa Gandaa taasisu, ykn hogganaa magaalaa. Sana booda Biiroon nii laatamaaf hojiis nii eegala.
Keessattuu barattoota Yuunibarsiitii xumuranii baan kanneen hiriira qindeessan addatti Qeerroo Bilisummaa Oromoo tu barbaadama. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gaggeessaa isaanii argachuun gaggeessaa Qeerroo tokko qabatan jechuun qabsoo sana dhaamsine jedhanii irratti walii galame. Kana irra dhabbatamee Oromiyaa keessatti amma hojiin bashbasha taeera. Barbaaddu hogganaa tauu, barbaaddu konkolaataan 3 ol sii kennamee magaalaa feete keessa sochootee hojii basaasummaa mootummaaf dalagda. Projectii guddaa Wayyaaneen maallaqa itti dhangalaaste kun namoota
akkamii gaagaaa jiraa?
Barataan hedduun akksuma dargaggoonnii keenya icciitii kana utuu hinbeekiin itti galaa jira. Magaalota Oromiyaa kanneen akka Gimbii, Mandii, Amboo, Naqamtee fi Baha Oromiyaa hedduu keessatti barattoota bara darbe eebbifamanii biyya jirantu bulchaa magaalaa, bulchaa Gandaa taaa jira. Maaliif akkana gootuun yoo gaafataman? Qabsicha keessa harki qabsaaota dirree facebookii akka jiru dubbatu. Sanas qabsoo karaa nagaa jecha jettu barattoota dura qabaa akka jiran, akkasuma caasaa Mootummaa mara seennee dhiibbaa uumnee biyyattii bulchina jechuun akka gowwonfamaa jiran argaa jirra.
Karoorri sarariitii kun namoota ejjennoo hinqabne qabuu dandaeera. Sarariitiin ilbiisota akka Titiisaa kan bakka mara seenu qabdi jenne mitiiree? Sarariitiin Titiisa kosii garaagaraarra jiraataa turte akka qabdee foonessitee nyaattu namuu beeka. Sarariitiin Wayyaanee maqaa OPDO qabu kun dargaggoota kaayyoo irratti hinamanne burjaajessuurra taree qabeera. Sarariitii OPDO xaxaa jirtuun dargaggoonni qabaman kun dhumni isaanii akkam taaaf wal nama hingaafachiisu. Yoo amanamanii Wayyaaneef hojjetan basaastota qaalii tauun garaa isaanii nii guddifatu. Garroomoti qabsoof seanii seenaa jiran dua akka tae duarra darbee foon isaaniif jireenya isaanii Wayyaaneen akka nyaachuuf jirtu namuu hubachuu qaba.
Falli maal tauu qabaa?
Qabsaauu feetaa? Uummatakee waanjoo garbummaarraa hiikuu feetaa? Uuummatakee garbummaarraa Bilisa baasuu feetaa?
Yoos ejjennoo qabaadhu! Kaayyoo irratti masakami! Qabsoon hedduudha. Qabsoo akkamii gaggeessitaa? Qabsoo jireenyaa, qabsoo bilisummaa, qabsoo of kabachiisuu. Isaan kana keessaa tokko filadhu. Qabsoo jireenyaa gaggeessuu feeta taanan karaa maallaqa argattu barbaadda.
Qabsoo Bilisummaa sabaa taanan kaayyoo duraaf kaayyoo jabaan Bilisummaa irratti ijaajjii dhaabadhu! Gaafa Qilleensi waliin dhooftotaa dhufu akka muka baargamoo hinraafamin! Muka jabaatarraa sibila jabaa dhaabbii tole tai! Kaayyookee maseensi kan uummataa dursi! Kaayyoo kee maseensuun maallaqaan bitamuu, maallaqaan gowwonfamuu, aangoon sossoobamuu irraa walaba si godhee bilisummaa qofaaf bilisummaa si dheebossa.
Duuchaatti qabsoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo hundeen kukkutuun kayyoo ABO hongeessuuf taasifamu itti fufee jira. Qeerroo Bilisummaa Oromoo argachuun nama ija tafkii barbaadu isaan taasiseera. Dargaggoota hedduu filanii aangoo laataafii jiru. Dargaggootni kun ammas Qeerroo dhaabni ABO ijaare tauu dhabuu irraan kan kae matabouu taeeraaf. Kumaaraan guddaan Wayyaaneen taphataa jirtu injifachuun dadhabuurraan nyaatamuu isaanii taaa jira. Ammas boris Qeerroo Bilisummaa Oromoo abbaan arge hinbeeku, abbaan arge hinbaru sichiyyuu mata dhukkubbii taaaf jenna.
Elaa walirra hinbeeknu hunduu umurii dargagummaarra jirra. Mee seenaa haa qorannu. Seenaa qabsoo ABO kaleessaaf haraa shira irratti taaa tureef jiru baruuf tattaafadhaa! Digirii baattanii digirii baannee nama kaabinummaan hoggansarra jiruuf nama barnoota illee hinqabneef ajajamuun hangam xiinsammuu akka nu xuqu hubadhaa! Hin raafaminaa! Ejjennoo irratti dhaabadhaa! Ejjennoo irratti kaayyoo sabaa irratti cichuu haa shaakallu